Qirashadu waa tubta hagaagga iyo dib u soo laabashada qarannimo!!!!!. | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxaan u baahan nahay inaan qiranno in wax weyn inaga khaldanyihiin. Waxaan filayaa Soomaali oo dhan saqiir iyo kabiir, rag iyo dumar, kuwa baadiyaha ku nool iyo baladka ku noolba ay dareemayaan in wax khaldan yihiin.
Waxaa maqan laba waxyaabood, laba arimood inaan qiranno oo ku dhiiranno inaan jirannahay iyo inaan qiranno inaan dawayn u baahan nahay. Inaan raadino dhakhtar bulshada daaweeya ama garan kara jirrooyinka bulshada.
Qirashadaas kaliya ayaa keeni karta bilawgii caafimaadka iyo bulsho wanaagsan ee dib u soo noqota. Hadda inta jirrada bulshadu soo caan baxday waa ilaa muddo ku simman soddon sano. Guba kan ka danbeeya, bilba bisha ka danbaysa, toddobaadba toddobaadka ka danbeeya wuu ka sii darayaa.
Heer-hadda waxaa bulshadu gaartay-aysan dhakhtar u tagi Karin, aysan garan karin waxa haya, aysan dareen lahayn. Waxay dhumisay dareenkii iyo caqligii qofeedkii iyo kii bulshada. Hadda waxay lamid noqotay, cunug jirran, oo xanuunkii ka batay, oo dareenkii iyo caqligii dhumiyay. Cunuga xaaladdaas ku sugan isma maamuli karo, wuxuu-hubaal- u baahan yahay, waalid, qaraabo, daris, cid isaga aan ahayn oo caawisa. Haddii cunugaas, adeerkii soo qabto, oo dhakhtarka u geeyo oo daawada gacantiisa ku siiyo, oo dhaqaaleeyo, waxaa laga yaabaa inuu dib u soo miyirsado, oo caafimaado. Bulshada Soomaalidu-sida ay aniga iigu muuqato- xaaladdaas oo kale ayay kusugan tahay. Waxay u baahantahay, wax qabta oo u taliya.
Haddii aan ogolaanno, qiranno, aqoonsano inaan jirranahay oo aanaan caadi ahayn, oo aanan bad qabin, waxaa fududaan lahaa in xalka loo soo dhawaado. Waxaa fududaan lahaa in dadka cilmiga bulshada bartay wax la waydiiyo. Waxaa fududaan lahaa in Isbaddalka la aqbalo, oo aan la diidin daawada kharaarkeeda, maxaa yeelay waxaa ka danbeeya caafimaad. Caafimaad la rabo ama la sugayo dartii ayaa loo adkaystaa kharaarka daawada. Sidaas darteed, haddii dadkeenu ogolaan lahaa inaan jiranahay, waxay aqbali lahaayeen daawada kharaarka badan ee Isbaddalka qaab dhismeedka bulshada iyo waxa ay rumaysan yihiin iyo sida ay u fikirayaan.
Tallaabada ugu horraysa ee aanu doonayno inaan qaadno, waa in dadka loo sheego inaysan sidan caadi ahayn, tanina ay tahay nolol liidata, qofka ku qanacsan, ku dhex noolna yahay mid liita, sidaa darteedna aan u baahannahay dhakhtar iyo in lagu baraarujiyo in nin laftiisaba xanuunsan uusan waxba taari karin, ee loo baahan yahay qof caafimaad qaba, kana badbaaday cudurka haaya isaga.
WQ: Sheekh C/raxmaan Jibriil